Warshad cunto "Chernyansky" waxay soo saartaa 15 tan oo shiilan Faransiis maalintii - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Axad, Maarso 7, 2021
Wax soo saarka Agrofirm "KRiMM" waxaa loo aqoonsaday inay yihiin badeecada ugufiican sanadka 2020 gobolka Tyumen
Warshad soo saarta baradhada
Ururka "Soyuzkrakhmal" wuxuu sii wadaa taxane koorsooyin casriyeyn ah
Warshada cuntada "Chernyansky" (gobolka Belgorod) waxay soosaaraysay wax soo saarkeeda mudo 11 sano ah. Waqtigan xaadirka ah, baradhada dibedda laga keeno waxaa loo isticmaalaa wax soo saar, laakiin tani saameyn weyn kuma leh xawaaraha iyo mugga shaqada.
Soo-saarka shiilannada faransiiska waa mid farsameysan oo kumbuyuutar ku shaqeeya. Si kastaba ha noqotee, kooxdu waxay ka badan tahay injineernimada 70 iyo shaqaalaha farsamada iyo shaqaale xirfad sare leh. Madaxa Teknolojiyada Natalya Latysheva ayaa booqasho ku bixisay geedka.
Nidaamka wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood. Marka hore, digriiga waa la dhaqaa, ka dib markii la dilo. Kadib, ku dhowaad hawlgalka gacanta ee habka farsamada ayaa la sameeyaa - dheeri ama xakameyn nadiifinta digriiga. Waxaa fuliya kormeerayaasha khadka: haddii tuber uu leeyahay cagaar, aagag waxyeelo leh ama cilado kale, waa la diidaa. Miiska baaritaanka, baradhada waxay galayaan nidaamka goynta biyaha. Baradhada la jarjaray waxaa lagu kala saaraa cabir ahaan iyo tayo ahaanba, taas oo lagu sameeyo qalab gaar ah iyadoo la adeegsanayo sawirro.
Taas ka dib, baradhada waxaa lagu nadiifiyey biyo kulul. Mesh a, durbaanka isdaba jooga ah ee wareega, waxaa laga daayay sonkorta iyo istaarijka. Qallajiye hawo leh heerkulkiisu yahay 60-100 ° C, dhammaan qoyaanka xad-dhaafka ah ayaa ka soo baxa cawska baradhada, badeecada waxaa loo diraa qallajiye qoto dheer Otomatikada waxay kuu ogolaaneysaa inaad xakameyso oo aad ilaaliso heerkulka saliidda ee aad dejisay. Baradhadu waa la shiilay laba ilaa shan daqiiqo heerkulkeedu yahay 160 ° C ilaa 190 ° C, waxay kuxirantahay noocyada iyo dhumucda goynta. Wax soo saarku waa badeecad gebi ahaanba dhammaatay oo dahabi ah oo leh qolof qoyan.
“Warshadeena soo saarida cuntada waxay soo saartaa ilaa 15 tan oo shiilan oo shiidan oo faransiis ah, kuwaas oo baahi weyn loo qabo oo aan aad ugu badneyn gourmets-ka iyo dadka caadiga ah, maalintii. Dhammaan alaabooyinka ayaa si toos ah isla markiiba loo geeyaa silsiladaha dukaamada iyo dukaamada, ayuu yidhi madaxa shirkadda Gennady Klyuchevsky.
Tags: Gobolka Belgorodshiilan Faransiis
Kordhinta: yaa u baahan horay-u-soocida badeecadaha iyo sababta
Chuvashia wuxuu taageeri doonaa shirkadaha ku hawlan ka shaqeynta wax soo saarka beeraha